Zvakanakira kuva tenzi franchisee | Franchiseek
Franchiseek»Zvakanakira kuva tenzi franchisee
Kana iwe uine seti yakasimba yekushanda, kushambadzira uye manejimendi kugona uye uchida kutora yako bhizinesi ekutsvaga kune inotevera nhanho, iwe unogona kunge wakagadzirira kuva master franchisee. Kuve tenzi franchisee chiitiko chikuru chakakura nebasa rakakura, asi rine huwandu hwezvakanakira zvibodzwa. Mune ino blog, tichave tichitarisisa mucherechedzo mune zvakanaka zvekuve tenzi franchisee.
Wedzera yako franchise network
Iyo bhizinesi mhando yeechero franchise yakagadzirirwa zvakananga kuti ikwanise kuwedzera uye kukura uye kuvaka bhizinesi kuitira kuti vakwanise kuwana hukuru mumusika wavo nekukurumidza uye nyore sezvinobvira. Nekudaro, pasina tenzi franchise chibvumirano, uku kukurumidza kukura hakuwanzo kuitika nguva dzose. Bhizinesi rinogona kunge risina zviwanikwa, ruzivo kana hunyanzvi hunodiwa kuvhura mayuniti munzvimbo nyowani, asi mamiriro emusika anogona kuratidza kuti uku ndiko kufamba kwakanyanya kuita. Semuenzaniso, kana mabhizinesi maviri akafanana achikwikwidza kuva bhizinesi rinotungamira mumaindasitiri akasarudzwa, kuisa chinamira pakuwedzera kwavo kunogona kupa avo vanokwikwidza mukana wekuwana mutsika mumisika mitsva uye vachiti huwandu hwakakura hwechikamu nepo bhizinesi rako richitora. kurohwa. Ne master franchising, iwe unogona kuwedzera yako franchise network mune zviitiko apo zvisingaiti mukati memiganhu yechinyakare franchising.
Kukurudzira uye mukurumbira
Kutanga tenzi franchise inogona kukupa yakakosha chinzvimbo muindasitiri, uye ne izvo, zvinouya kuwedzera mari uye kugutsikana kwebhizinesi. Iwe unogona kuve ane simba mubhizimusi rako raunosarudza, uye kana basa rako rikabudirira, harizongotungamira mukukosha kwakawanda asi iwe unozovawo chikamu chakakosha chetiweki yewewe sarudzo yako. Sezvo bhizinesi racho parinokura uye richikura kuita nzira nyowani, iwe, senge uri master franchisee, unozoita chikamu chebhizimusi rose rinogona kukutendera kukura iwe pachako uye nehunyanzvi.
Kazhinji, tenzi vefrancisees vanozoita basa rekutungamira vega, nerubatsiro rwevashandi vekutsigira, mudzidzisi, mubatsiri wezvekutengesa, uye zvinogona kutengesa mukuru kukubatsira kutengesa bhizinesi. Sezvo tenzi wako franchise inokura, iwe ungangoda kuwedzera vashandi vazhinji kuchikwata chako sezvo iwe uri mutoro wekukudziridza nekuwedzera ndima yako uye nekupa rutsigiro kune ako mafrancisees. Iwe hauchazoda vashandi vazhinji apo franchise yako ichiri kukura, uye vazhinji tenzi franchisees vane timu shoma kwazvo iyo inoumbwa neyekudzidzisa, mupi wezano uye mubatsiri wekutonga.
Kupa yako franchisees yekuwedzera-masevhisi inogona kukupa iwe yekuwedzera sosi yekubatsirwa. Anogona kuwedzera-pamasevhisi iwe aunogona kupa anosanganisira kubvunzurudza masevhisi, vanhu kubata, kushambadza mabhuku uye accounting mukuchinjana imwe mari. Kunyange iyo chikamu chikuru chemari yako chichiuya kubva kune yako yekubhadhara ada uye franchising ada peresenti, iwe zvakare une mukana wekugadzira imwe purofiti kubva kune chitupa uye kudzidziswa. Chero chipi zvacho chakawedzerwa chaunowana pamusoro pemubhadharo wako kubva kumambo weumambo uye franchise inobhadharisa mari yacho.
Yakatangwa bhizinesi modhi
Imwe yemabhenefiti akakosha ekuita kuzvipira kuti uve master franchisee ndeyekuti iwe uchave uine yakazara-yakaumbwa franchise package inowanikwa kwauri neyekuzivikanwa kwechiratidzo yakatogadzwa pamusika. Haungofaniri kutora pane rakakura basa rekutora bhizinesi pasi sezvo uchizopihwa iro rakaratidza bhizinesi rekuenzanisira nehurongwa hwakatoona kubudirira. Zvese zvinhu zvakagadzirira uye zvakamirira kuti iwe utore pachinetso, kuti iwe ugone kushanda ipapo nekubatsira kusundira bhizinesi kunyange mberi.
Nharaunda isina kujairika
Sa tenzi franchisee, iwe uchapihwa nzvimbo yekusarudzika neruzhinji rwezvitenzi zvibvumirano zve franchise. Paunotora basa re master franchisee yenzvimbo yako, iyo nharaunda chaiyo ndeyako uye kune ma franchisees aunoshandira. Iwe haufanirwe kunetseka nezve kuve mumakwikwi neiyo imwe franchise seyako, izvo zvinokupa iwe hupfumi hwemikana maererano nekuwedzera uye kukura.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve maitiro ekugadzirisa bhizinesi rako kana kuve master franchisee, tarisa kutenderera kweFranciseek. global franchise directory.
Chii chinonzi Rent2Buy? Isu tiri FCA yakabvumidzwa yakawanda-mhando, mhando yedhijitari yekutengesa uye yemari masevhisi, tichivavarira kupa vatengi vedu…